Xulka Croatia oo iska xaadiriyay ciyaarta kama-dambeysta ee koobka dunida • Horseed Media
You are here: Home / Sports / Xulka Croatia oo iska xaadiriyay ciyaarta kama-dambeysta ee koobka dunida
Xulka Croatia oo iska xaadiriyay ciyaarta kama-dambeysta ee koobka dunida
Xulka Croatia ayaa markii ugu horeysay taariikhda iska xaadiriyay ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka adduunka kadib markii ay 2-1 uga adkaadeen xulka England , ciyaar soo jiidatay indhaha caalamka.
Daqiiqada 5aad ayay xulka lagu naaneeyso sadexda libaax heleen gool furitaanka ciyaarta waxaana u dhaliyay xidigooda daafaca Kieran Trippier kaasoo laad xor ah la tiigsaday shabaqa kooxda Croatia.
Weerar isdaba joog ah oo labada xul ay la yimaadeen waxa ay ugu dambeyn qeybtii hore ee ciyaarta kusoo idlaatay 1-0 oo ay hogaanka ku haysay xulka Britain.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa ciyaartoyda xulka Croatia ay bilaabeen qaab ciyaareed halis ku abuuray xulka three lion-ka,lagu naaneeyso waxaana dadaal dheer kadib ay ugu dambeyntii daqiiqadii 68aad ay heleen goolka barbaraha oo uu u dhaliyay ciyaaryahanka garabka uga ciyaara xulka Croatia Ivan Perišić.
Waxay socotaba ciyaarta 90kii daqiiqo waxa ay kusoo idlaatay natiijo barbar dhac 1-1- ah waxaana la go’aamiyay in 30 daqiiqo oo dheeri lagu daro ciyaarta si loo kala saaro labadan xul ee ismari waayay.
Soddonka daqiiqo ee ciyaarta lagu daray weliba daqiiqadihii ugu dambeeyay ayay xulka Croatia la yimaaadeen goolkii guusha u horseeday oo uu u dhaliyay xidigooda Mario Mandzukic, sidaas ayayna xulka Croatia ugu soo gudbeen finalka tartanka ciyaaraha koobka dunida.
Axada soo socota ayay xulalka Faransiiska iyo Croati iskaga hor-imaanayaan ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka dunida, waxaana labadan xul midkood kii badiya uu hanan doonaa koobka ugu qaalisan dunida ee 4-tii sanaba mar la qabto, halka iyana dhankooda xulalka Belgimka iyo Ingiriiska ay ku tartami doonaan kaalinta sadexaad ee koobkan aduunka maalinta sabtida ee soo socota .